यसरी ठगिन्छ दिल्लीमा नेपाली !
ARCHIVE, NEWSPAPER » यसरी ठगिन्छ दिल्लीमा नेपाली !
नयाँदिली -वैदेशिक रोजगारी तथा विद्यार्थीको रुपमा पठाउने आश्वान दिदै नेपाली युवायुवतीलाई ठगी गर्ने घट्ना पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएका छन् । केही महिनायता आफुहरु ठगिएको भन्दै दिल्लस्थित नेपाली दुतावामा उजुरी गर्नेको संख्या बढेको छ ।
दिनहुँजसो दुतावासमा ठगिएका उजुरी आईरहेका छन् । दिल्लीबाट तेस्रो मुलुक जाने विषयमा बुझ्न या पैसा बुझाउनुअघि परामर्श लिन दुतावास आउनेको संख्या भने शुन्यप्रा छ । अधिकारहीका अनुसार पहिल्यै परामर्श गर्न आए ठगिने सम्भावना कम हुन्छ ।
दिल्लीबाट भिसा लगाइ तेस्रो मुलुक पठाउने प्रलोभन देखाएर ल्याउने र पैसा असुलेपछि फरार हुने घट्ना बढिरहेको छन् । यस्ता ठगिका घट्नामा भने प्राय नेपाली नै संलग्न हुने गरेका छन् । विशेषतः नेपाल र भारतमा ठगी गर्ने गिरोहको सञ्जाल नै सक्रिय छ ।
पहिलो नेपालमा रहेका दलाले दिल्लीबाट अन्य मुलुक लैजाने भन्दै दिल्ली पठाउने र यहा अर्को दलाल संलग्न हुने गरेको पाईएको छ, यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।